Haweeneydii 3-aad oo muddo labo maalmood ah lagu dilay Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Koox toorreeyo ku hubeysan ayaa xalay xaafada Warshaddii Kabka ee Degmada Hodan ee Muqdisho ku dilay gabar ka mid aheyd dadka deegaanka.
Ragga dilka geystay oo wejiyada soo qarsaday, ayaa gabadhaas oo magaceeda lagu sheegay Hodon ku dhuftay ilaa 7 toorrey, waxeyna markaas kadib ka baxsadeen goobta.
Qof ka mid ah dadka deegaanka ayaa u sheegay warbaahinta, haweyneyda oo horay usoo dhashay 2 caruur ah, hase ahaatee haatan aheyd madax banaan ay soo waceen dadka dilay, kadib markii ay debadda gurigeeda ugu baxdayna ay toorrey ku bilaabeen.
Ciidamada Nabad Suggida Soomaaliya, ayaa waxay hawlgal ka sameeyeen halkii haweeneyda lagu dilay, balse ma jirto cid ay dilkeedii u soo qab qabteen, waxayna meydka gabadhaasi u qaadeen Xarunta CID-da, si baaritaano loogu sameeyo.
Dilka gabadhan ayaa welwel ku abuuray dadka ku nool xaafadda, waxaana dilkeedu kusoo aaday kadib markii 2-dii bishaan laba hablood lagu qaarajiyay xaafada Mac-Macaanka ee Degmada Dharkiinley Magaalada Muqdisho.